Fiaramanidina misy tehina hazo | Asa tanana
Fiaramanidina misy tehina hazo
DonluMusical | | Asa-tanana ho an'ny ankizy, fanodinana
Ireo fiaramanidina izy ireo dia anisan'ny kilalao tiako indrindra. Hatramin'ny mbola kely dia nanandrana namorona ireo fitaovana ireo izahay, tsy tamin'ny taratasy ihany, niaraka tamin'ny fitaovana rehetra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao amin'ny dingana vitsivitsy aho amin'ny fomba hanaovana an'io fiaramanidina misy tehina hazo izay ampiasainay amin'ny tsato-kazo na amin'ny asa-tanantsika maro.
1 Fitaovana hanaovana ny fiaramanidina
2 Fomba fanao amin'ny fanaovana ny fiaramanidina
Fitaovana hanaovana ny fiaramanidina
Kavina hazo miloko roa habe
Eva fingotra totohondry araka ny itiavanao azy
Fomba fanao amin'ny fanaovana ny fiaramanidina
Apetaho eo ambanin'ny clamp ny hazo iray ary apetaho eo afovoany. Ataovy toy izany koa eo an-tampony, manandrana mitazona ireo hazo roa ireo amin'ny halavany.
Avy eo mametraha iray hafa amin'ny ho avy ny rambon'ny fiaramanidintsika, andramo ihany koa ny mametraka azy tsara eo afovoan'ny clamp.
Miaraka amin'ny fanampian'ny perforator ireo endrika tianao indrindra, haingo ny fiaramanidina. Hampiasa kintana sy spiraly ho an'ny elatra aho satria heveriko fa tena izy ireo, saingy azonao ampiasaina ilay ao an-trano.
Hametraka tadin-tsolika roa amin'ny sisin'ny elatra aho ary kintana any aoriana.
Efa vita ny fiaramanidina, Fa raha tianao dia mbola azonao atao ny manaingo azy bebe kokoa amin'ny marika ary apetaho, ohatra, ny anaranao na ny kintana na famantarana vitsivitsy ahafantarana anao. Azonao atao ny mitondra azy any am-pianarana mba hampisehoana izany amin'ny namanao ary azo antoka fa ho tian'izy ireo izany.
Raha tianao Origami, Manolotra ity maodely fiaramanidina ity izay manidina betsaka aho, azoko antoka.
Hatreto dia ny asa tanana androany, manantena aho fa tianao izany ary raha manao izany ianao dia aza adino ny mandefa sary amiko amin'ny alàlan'ny tambajotran-tserasera misy anao, satria tiako ny hahita azy ireo.
Mandrapihaona amin'ny hevitra manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa-tanana ho an'ny ankizy » Fiaramanidina misy tehina hazo
Vazy ambanivohitra manamboatra divay divay iray tavoahangy
Fomba fanaovana UFO handravahana na hilalaovana